सन् २०३० सम्ममा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्राउने सम्भव छ
पाटा नेपाल च्याप्टर
काठमाडौं गेस्ट हाउसबाट सेवाक्षेत्रमा लगानी सुरु गरेका शाक्यहरूको अहिले काठमाडौं ग्रुप अफ होटल समूहको नाममा झन्डै एक दर्जन होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय थप लगानी गर्ने सोचमा समेत ‘केजीएच’ ग्रुप रहेको छ । कर्ण शाक्यले सुरु गरेको लगानी अहिले उनका छोरा सुनिल शाक्यले सम्हाल्दै आएका छन् । विगतमा नेपाल वायुसेवा निगममा १० वर्षसम्म पाइलटको काम गरेका शाक्य अहिले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । केही समयअघि मात्र एसिया प्यासिफिक (पाटा) नेपाल च्याप्टरका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका शाक्य सन् २०३० सम्ममा नेपालमा ५० लाख पर्यटक भित्राउने सकिने दाबी गर्छन् । पूर्वाधारमा लगानी हुन नसक्नुले नै पर्यटक आगमनदर बढ्न नसकेको बताउने शाक्य राजनीतिक स्थिरतासँगै अब बन्ने सरकारले पूर्वाधार लगानीमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा अब निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गरे मुलुकको आर्थिक समृद्धि नै पर्यटनबाट सम्भव भएको बताउने शाक्यसँग कारोबारका लागि केदार दाहाल र शिव बोहराले गरेको कुराकानीको सार ः
तपाईंहरूले सन् २०३० सम्ममा ५० लाख पर्यटक भिœयाउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राख्नुभएको छ नि, पुग्छ ?
लक्ष्य भन्ने कुरा राखेपछि पूरा हुन्छ । एकातर्फ नेपाल अनेक अस्थिरताबाट अगाडि बढ्दै छ भने अर्कातिर सबैले पर्यटन क्षेत्रलाई चासो दिइरहेको अवस्था पनि छ । सन् १९९८ मा हामीले ५ लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखेका थियौं । सोही समयमा लक्ष्य राखेपछि पूर्वाधारहरू पनि धेरै तयार भएका थिए । पछि नेपालको पर्यटनमा खराब दिन सुरु भए । पुनः सन् २०११ मा नेपाल पर्यटन वर्ष भन्दै १० लाख पर्यटक भित्राउनेलक्ष्य राखेका थियौं, जुन बल्ल पूरा हुने तर्खरमा आएको छ । तर, सन् २०११ पछिको नेपालको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ । पर्यटनमा निजी क्षेत्रले धेरै पूर्वाधार खडा गरेको अवस्था छ । हामीले राखेको लक्ष्य पु¥याउन अहिले सन् २०१७ को वृद्धिदर जारी रहे सजिलै २०३० मा ५० लाख पर्यटक नेपाल आउनेछन् । तर, त्यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले गर्नुपर्ने केही काम छन् । सरकारले विमानस्थल तथा सडक निर्माणमा जोड दिँदैै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु आवश्यक छ भने निजी क्षेत्रले, जुन अहिले होटल क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्, यसले निरन्तरता दिनु जरुरी छ । यसरी अगाडि बढ्न सके ५० लाख पर्यटक नेपालमा सजिलै भित्रिनेछन् ।
नेपालमा पर्यटक भित्रिन थालेको १ सय २० वर्ष हुँदा १० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । तर, अबको १३ वर्षभित्रमा वार्षिक ५० लाख भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा के योजना छ यसरी पुग्छ भन्ने ?
पछिल्लो समय भनेको भूकम्पका कारणले सन् २०१५ नेपालको पर्यटनमा खराब वर्ष रहेको थियो । सन् २०१६ र २०१७ को वृद्धिदर उच्च रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशतको वृद्धिदर राम्रो मानिन्छ । तर, नेपालमा सन् २०१७ मा २४ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । यसमा हामी सबैले केही मेहनत गर्न सक्यौं भने ३० प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सक्छौं । वार्षिक ३० प्रतिशतको वृद्धि भयो भने सजिलै ५० लाख पुग्नेछ । यसमा ३० प्रतिशत वृद्धि गर्न सहज त छैन । तर, हामीले गरेको अनुमानमा नेपालमा अब स्थिर सरकार बन्छ । नेपालमा अब द्रुत गतिमा पूर्वाधार तयार हुन्छन् । नेपालमा सन् २०२५ सम्ममा चीनबाट लुम्बिनीसम्म रेल गुड्छ, डाँडामा केवलकार बन्छन् भने पोखरा, भैरहवा र निगजढमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छन् । त्यस्तैगरी काठमाडौं र तराई जोड्ने द्रुत मार्ग बन्छ भने अन्य स्थानहरूमा पनि ठूला सडक र चुस्त सहर हुने अनुमान गरिएको छ । यति पूर्वाधार तयार भयो भने ५० लाख पर्यटक भित्रिन्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।
तपार्इंहरूलाई ५० लाख पर्यटक ल्याउने आशावादीचाहिँ केले बनायो ?
पर्यटन व्यवसाय नै आशाको क्षेत्र हो । जस्तोसुकै अप्ठेरो अवस्थामा पनि हामीले आशा राख्दै आएका छौं । पछिल्लो समयको आशा भनेको मुलुक संघीयतामा गएको छ, अब विकासका कामहरू अगाडि बढ्नेछन् । अर्कातर्फ भने भर्खरै मात्र तीन तहका चुनाव सम्पन्न भएर नयाँ सरकार आउने तयारीमा पुगेको छ । यसले नै मुख्य आशा दिएको हो ।
यसका लगि होटलहरू पनि आवश्यक पर्छन् । यसमा अहिले भइरहेको लगानीले धान्न सक्छ ?
नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका होटलहरूमा ३५ प्रतिशत अकुपेन्सी मात्र छ । त्यसमा अहिले अधिकांश होटलको लगानी घाटामै रहेको छ । नेपालमा कस्तो समस्या छ भने सिजनमा रुम नपुग्ने अफ सिजनमा होटल खाली हुने गरेको अवस्था छ । जे भए पनि अहिलेकै होटलको क्षमताले ५० लाख पर्यटक भने धान्न सक्दैन । त्यसका लागि अन्य ठूला होटलहरू थपिनु आवश्यक छ । होटलहरूमा नयाँ लगानी पनि आइरहेकाले होटलको क्षमता बढ्नेछ । अब होटलमा लगानी काठमाडौं मात्र होइन, देशका अन्य ठाउँमा पनि जानु आवश्यक छ । फाइदा हुने ठाउँमा होटलहरूमा निजी क्षेत्र आफैं जान्छन्, तर नयाँ गन्तव्यको विकासका लागि सरकारले केही सुविधा दिनु आवश्यक छ ।
यतिका कुरा भनिरहँदा पाटाले मात्रै योजना बनाएर लक्ष्य पूरा हुन्छ ?
पाटाको मात्रै योजना होइन । पाटा भनेको सबै निकायको केन्द्र हो । यहाँ नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम, पर्यटन विभाग सबैका प्रतिनिधिहरू छन् । पर्यटन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सबै निकाय पाटामा आबद्ध छन् । यसले सरकारकै बडीहरूसँग छलफल गरेर लक्ष्य र योजना बनाएको हो ।
पर्यटनको विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रमा केमा केन्द्रित हुनुपर्छ ?
पहिलो भनेको पूर्वाधार नै हो । यसमा अब सबैको ध्यान मात्रै जाने होइन, निर्माण हुनु पनि आवश्यक छ । अहिले पर्यटक रोक्ने काम त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएको छ, जसको धेरै पर्यटक ल्याउने क्षमता नै छैन । एयरलाइन्सहरू कति आउन खोजिरहेका छैन, तर हामी अनुमति दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जसका लागि विमानस्थलसँगै नेपाल वायुसेवा निगमले ठूला जहाजमार्फत ठूला पर्यटक बजारमा सीधा उडान हुनु आवश्यक छ । अहिले १ सयभन्दा बढी उडान लुक्लामा हुने गरेको छ । खै पूर्वाधार खडा गरेको ? नेपालमा खै ठूला एयरलाइन्सहरूले लामो दूरीबाट उडान गर्न सकेको ? पहिलो सर्त भनेको पूर्वाधार नै हो । चीनमा ६० वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हँुदैछन् । भारतमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स तयार हुँदैछन् ।
अबको हाम्रो पर्यटन बजार कुन हो ?
भिजन योजना भनेकै यसका लागि आवश्यक छ । त्यसैले त पहिले लक्ष्य राख्ने र लक्ष्यलाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने योजना चाहिन्छ । अबको हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको बुद्धिस्ट पर्यटक कसरी नेपाल ल्याउने भन्नेमा जानुपर्छ । विश्वका धेरै बुद्धिस्टहरू नेपाल आउन चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई ल्याउने कार्यक्रम र नेपालमा पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नेपालमा थाइल्यान्ड, म्यानमार, चीन, कम्बोडियाबाट बुद्धिस्ट पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । विश्वमा २४ प्रतिशत जनसंख्या बुद्धिस्ट छन् । यसका लागि चीन ठूला सहरमा हाम्रो सीधा उडान हुनु आवश्यक छ । त्यस्तैगरी भारतबाट हिन्दूहरूलाई ठूलो संख्यामा नेपाल ल्याउन सकिन्छ । भारतका मुख्य सहरमा हामीले सीधा उडान गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको पर्यटक बजार भनेको एसिया नै हो । हाम्रा युरोपियन र अमेरिकन पर्यटक भनेका सदाबहार हुन्, जो नेपालको हिमाल हेर्न आउँछन् ।
अबको पर्यटन प्रवद्र्धनको फोकस कस्तो हुनु आवश्यक छ ? ब्रोसर बाँडेर त पर्यटक नेपाल आउँदैनन् ।
विश्वमा अहिले डिजिटल मार्केटिङ चलेको छ । हाम्रो फोकस त्यतैतर्फ हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि पाटा र नेपाल सरकार मिलेर हिमालयन ट्राभल मार्ट सञ्चालन गरेका थियौं, जसमा १ सयभन्दा बढी ब्लगर सम्मेलनसमेत भएको थियो, जसबाट नेपालका बारेमा सयौं ब्लगर लेखिएका छन् । आजभोलि घुम्ने पर्यटक भनेको सबै कुरा पहिले नै जानकारी लिएर आउने गर्छन्, जसका नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि ट्विटर, फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालदेखि चीन, भारतलगायतका टेलिभिजन अनलाइन पोर्टलहरूमा विज्ञापन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तैगरी गत वर्षका जस्तै मार्टहरू सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । अबको युग भनेको डिजिटल मार्केटिङकै हो । एक क्लिकमा नेपालको कुन क्षेत्रका कस्तो भौगोलिक अवस्था छ ? कस्तो प्याकेज कुनले दिएको छ भन्ने सबै इन्टरनेटमार्फत जानकारी लिन्छन् । यसका लागि भनेको डिजिटल मार्केटिङ नै हो ।
हिमालयन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नेपालसँगै अन्य हिमाली देशहरू जोड्नु आवश्यक छ भन्दै पाटा मार्टमा मुख्य नारा दिइएको थियो नि ?
हिमालयन क्षेत्रको प्रवेशद्वार भनेको नेपाल हो । नेपालबाट अन्य हिमाली देशहरू पाकिस्तान, भुटान, तिब्बत, चीनसहित जोडेर प्रवद्र्धनमा जानुपर्छ भनेर उक्त नारा दिइएको हो, जसले गर्दा नेपालसहित एसियाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसका लागि धेरै प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् ।
पर्यटनका सम्भावनाहरूको कुरा गर्दा मुख्य पूर्वाधार विमानस्थलपछि एयरलाइन्स आउने गर्दछ । नेपालमा निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा किन लगानी गर्न सकेका छैनन् ?
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विमानस्थलपछिको मुख्य पूर्वाधार एयरलाइन्स हो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको मुख्य दायित्व हो, जसमा सरकारले गर्नुपर्ने संरक्षण लगानी गरेको छैन, जसका कारण आज ठूला गन्तव्यमा निगमको उडान हुन सकेको छैन । यसमा लगानी गर्न अब निजी क्षेत्रबाट पनि विगतदेखि नै प्रयासहरू भएका थिए । अहिले पनि केहीले प्रयास गरिरहेका छन् । एयरलाइन्सको लगानी भनेको मुख्य पुँजी नै हो । ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने र लगानी उठाउन अत्यन्त कठिन हुने क्षेत्र भएकाले पनि निजी क्षेत्रले छिटो लगानी नगर्ने क्षेत्र हो । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर नै एयरलाइन्स क्षेत्रमा धेरै निजी लगानी भएका छैनन् । भारतमा केही समय आक्रामक लगानी भएर आएको ‘किङ फिसर’ कै उदाहरण दिन सकिन्छ, जसका मालिक विजय माल्य अहिले लुकेर बेलायतमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । नेपालमा पनि नेपाल एयरवेज, कस्मिक एयरलगायतले प्रयास गरेका हुन् । अहिले निजी क्षेत्रको लगानीमा हिमालय एयरलाइन्सले दुई वर्षदेखि उडान भर्दै आएको छ । एयरलाइन्स भनेको २ प्रतिशत नाफामा चलाउनुपर्ने व्यवसाय हो, तर लगानी अर्बौंको हुन्छ । त्यसैले नेपालमा निजी क्षेत्रको एयरलाइन्समा लगानी हुन नसकेको हो ।
तपाईं त पेसाले पाइलट पनि हुनुभएको थियो । नेपालमा जनशक्ति अभाव एयरलाइन्स क्षेत्रमा चर्को बन्दै गएको छ । समाधान गर्ने उपाय के छन् ?
एयरलाइन्स क्षेत्रमा नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरका एयरलाइन्स क्षेत्रले जनशक्ति अभाव भोगिरहेका छन् । उक्त समस्याबाट नेपाल पनि मारमा परेको छ । जनशक्तिकै अभाव भए पनि हवाई सुरक्षादेखि अन्य विषयहरू आउने गर्छन् । नेपाललाई युरोपेली आयोगले अहिले पनि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । जनशक्ति उत्पादन भनेको छिनभरमा हुने कुरा होइन । नेपालमा एभिएसन स्कुल स्थापना हुन सकेको छैन । विगतमा १५ सय घण्टामा क्याप्टेन पाउने गरेका थिए भने अहिले जनशक्ति अभाव भएपछि ८ सय घण्टामै क्याप्टेन दिने गरिएको छ । यो सबै जनशक्ति अभावको कारण हो । नेपालमा अहिले अमेरिका, युरोपबाट १० हजार डलरसम्म दिएर पाइलट इन्जिनियरहरू ल्याइने गरिएको छ । नेपालमा मात्रै होइन, भारत, चीनमा पनि चरम अभाव छ ।
तपार्इंहरूको समूहले एयरलाइन्समा लगानी गर्ने कुनै सोच छैन ?
मैले अगाडि पनि भनें, लगानी गर्ने मन छ तर डर लाग्छ । मैले पनि १० वर्ष पाइलट पेसा गरेको थिएँ । विगतमा सांग्रिला एयर चलाएका हौं, तर सफल पार्न सकेनौं । ठूलो खर्च हुने भएकाले एयरलाइन्समा लगानी भनेको जोखिम नै हो । नेपालमा अब नयाँ विमानस्थलहरू आउँदैछन् । भारतमै पनि नयाँ विमानस्थलमा एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई विभिन्न छुट दिइएको हुन्छ । नेपालमा नयाँ विमानस्थल भैरहवा, पोखरामा नयाँ विमानस्थल खडा हुँदैै छन् । यसका लागि एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई छुट दिएर जानुपर्छ ।
आन्तरिक एयरलाइन्सहरूको पनि लगानी विस्तारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ, स्थायित्व हुने देखिन्छ ?
विश्वमा अहिले सबैभन्दा महत्वपुर्ण भनेको समय हो । अहिले आजको दिनमा भैरहवा गएर त्यहाँ काम सकेर एकैदिन काठमाडौं आउन सक्छु । अहिले हवाई यात्रुको संख्या वार्षिक रूपमा व्यापक मात्रामा बढ्दै गएको छ । दिल्ली गएर एकै दिन फर्कने अवस्था आएको छ । नेपालमा अहिले बुद्ध, यति एयरलाइन्सले दशकौंदेखि राम्रो नाफा कमाइरहेका छन् । त्यस्तैगरी अहिले नयाँ एयरलाइन्सहरूमा पनि धेरै लगानी भइरहेका छन् । व्यवस्थापन राम्रो गर्न सक्नेहरूले एयरलाइन्स बिजनेस नेपालमा राम्रो हुँदै गएको छ । नेपालजस्तो ठाउँमा हवाई क्षेत्रको विकल्प नै छैन । अहिले हेलिकप्टर क्षेत्रमा लगानी गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीले पनि राम्रो गर्दै गएका छन् । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरू, जहाँ सडकबाटो जान १० दिनसम्म लाग्ने ठाउँ छन्, त्यहाँ हेलिकप्टर नै विकल्प हो ।
लामो समयदेखि होटल क्षेत्रमा लगानी गर्दै आउनुभएको छ । अहिले लगानी विस्तारको कुनै योजना छैन ?
नेपालमा धेरै लामो समयदेखि होटल क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छौं । काठमाडौं गेस्ट हाउसदेखि सुरु भएको व्यवसायमा अहिले लगानी विस्तारको क्रम जारी छ । विस्तार भनेको, अहिले भैरहवा र बूढानीलकण्ठमा रहेको पार्क भिलेजलाई निकट भविष्यमै पाँचतारेमा विस्तार गर्ने योजना भने बनाएका छौं । अर्कातर्फ भने हाम्रो भनेको गुणस्तरमै ध्यान दिने हो ।